अप्रिय रोगहरू मध्ये एक, जो महत्त्वपूर्ण ढंगले जीवन खराब गर्दछ, सिस्टाइटिस हुन्छ। मूत्राशय को संक्रमण मुख्य रूप देखि महिलाहरु लाई यसको एंटोमीमी को विशेषताहरु को कारण प्रभावित गर्दछ। यदि सिस्टाइटिस उपचार सही ढंगले कार्यान्वयन गरिएन भने त्यस व्यक्तिले आफैंसँग निरन्तर सभाहरू र गम्भीर जटिलताहरूको विकासलाई दोषी बनाउँछ।
यो रोगको प्रभावकारी उपचारमा एक महत्त्वपूर्ण कारक रोगीको समयमै परिक्षण हो। सिस्टाइटिसको पहिलो लक्षणहरूमा यो जीवनीज्ञको भ्रमण गर्नु आवश्यक छ। यसको सफल उपचारको लागि यो सबै रोगजनहरू निर्धारण गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूमध्ये, एक बिजुली पथ्रोजेनिक फ्लोरा र एसटीडी दुवै हुन सक्छ।
सिस्टाइटिसको लक्षणहरूको लागि किनु पर्छ:
सामान्य मूत्र र रगत;
एन्टिबायोटिकोग्रामको साथ बोक्सी मूत्र;
एंटीबायोटिकोग्रामको साथ माइक्रोफ्लोरामा बसाल्दै;
पीसीआर स्क्रैपिंग (हेरपेस, साइटोनोगोलियोरस, एचपीवी, गोंकोकोसी, क्लैमिडिया ट्रेक्मैटिस, ट्रिचोमनडस, म्याकोप्लाज्मा जेनालिटिकिया);
एंटीबायोटिकोग्रामको साथ मेरो माइक्रोस्लामा र यूरेपोलोजामा बसाल्दै ।
एचआईभी, सिफलिस, हेपेटाइटिस, टोक्सोप्लासमोसिस, तपेदिकको लागि रगतको खोजी गर्न यो पनि आवश्यक छ।
कुनै पनि औषधि लिनु अघि व्यापक परीक्षा पार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। निस्सन्देह, तीव्र सिस्टाइटिसको साथ, परीक्षणहरूको परिणाम अपेक्षित छैन र थेरेपी निर्धारित गरिएको छ। तथापि, आवश्यक भएमा उपचारको पुनरुत्थान, प्राप्त भएपछि पछि पूरै हुन्छ।
साथीहरूको सल्लाह प्रयोग गरेर स्वतन्त्र रूपमा सिस्टाइटिसको उपचार गर्न, यो असंभव छ। एंटीबायोटिक्सबाट बच्न पनि काम गर्दैन। प्राकृतिक तयारी र फीसको प्रयोगले राम्रो परिणाम दिन्छ, तर केवल यसको अतिरिक्त। तिनीहरू रिपाप्सहरू रोक्नको लागि पनि उपयोगी छन्।
यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि सिस्टाइटिस को लक्षण आफै मार्फत जान सक्छ, तर यसको उपचार भनेको होइन। केवल एक रोग पुरानो रूप मा पारित भएको छ, र कुनै प्रकर्तक कारक यसको बढाव को कारण हुनेछ। यस अवस्थामा सिस्टाइटिसको उपचार धेरै जटिल छ। यसले धेरै समय र पैसा लिनेछ।
रोगको प्रायः रिफैप्सहरू ब्लडेरको पर्खालमा अपरिवर्तनीय परिवर्तनहरूको नेतृत्व गर्दछ, समयको साथमा, यसको सामान्य कार्यलाई बाधा पुऱ्याइएको छ। यो मूत्र असंतोष, क्यान्सर, कम क्षमता, निरन्तर पीडा हुन सक्छ।
प्रायः, सूजन गुर्दे मा फैल्छ, अन्ततः पुरानो पेलोनप्रिथिस लाई। यो रोगले गुर्देको विफलताको शुरुआतमा योगदान दिन्छ।
त्यसोभए, एक व्यक्ति कसरी पिस्टिस्टाइटिसको लागि उपचार गरिएको छ र अब यो सामना गर्न चाहँदैन? थेरेपीले एंटीबैक्टेरियल, प्रतिरक्षा, एन्टिफुगल औषधिमा आवश्यक पर्दछ। यो ड्रिगोलहरूमा समावेश गर्न आवश्यक छ जसले माइक्रोफ्लोरोलाई सामान्य बनाउँछ र लिभरलाई समर्थन गर्दछ।
3 हप्ता पछि, निगरानी गरिन्छ। मूत्र (सामान्य र बियर) को अनिवार्य विश्लेषण। जब कुनै एसटीडी को उपचार, उनको पीसीआर र ELISA नैदानिक प्रदर्शन गरिन्छ। यदि परीक्षणहरूमा असामान्यताहरू छन् भने, डाक्टरले दोस्रो चरणको थेरेपीको वर्णन गर्नेछ, सम्भवतः अर्को वा धेरै लागू औषधि प्रयोग गरिनेछ।
उपचार पछि, निवारण पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। तिनीहरूले जडीबुटी, uroseptics, immunomodulators, जो जिगर र माइक्रोफेरो पुनर्स्थापना गर्ने ड्रगहरू समावेश गर्न सक्छन्।
यो हरेक महिना urinalysis (कुल र बियर) सञ्चालन गर्न सल्लाह छ। यसको अतिरिक्त, यो एक दन्त चिकित्सक र एक otolaryngologist हेर्न को लागि उपयोगी हुनेछ, को रूप मा carious दांत र nasopharynx को पुरानो सूजन सिस्टाइटिस को पुनरावृत्ति को बढावा दिन सक्छ।
रोगको पुरानो कोर्समा, राम्रो डाक्टरबाट सिस्टोस्कोपी बनाउन आवश्यक छ। उनले मूत्राशय को पर्खाल को क्षति को डिग्री को मूल्यांकन गर्नेछन् र एक थेरेपी को वर्णन गर्नेछन्।
सिस्टाइटिस सफल भएन, यो कडा रूपमा निषेध गरिएको छ:
त्यहाँ धूम्रपान, पिकर, नमकीन, मसालेदार छ।
पेय कफी, शराब, फिज्ज;
बलियो शारीरिक तनावको अधीनमा राख्न;
कन्डम बिना यौन सम्बन्ध राख्नु, सामान्यतया यो उपचारको बेला यो पूर्णतया त्याग गर्न राम्रो छ।
त्यसोभए, प्रभावकारी सिस्टाइटिस उपचार एक लामो र समय लगाउने प्रक्रिया हो, खासकर यदि रोग सुरु हुन्छ। केहि एंटीबायोटिक्स को कोर्स काम नहीं गर्नेछन्। एसटीडी मा समावेश एक व्यापक परीक्षा आवश्यक छ। वर्षको दौडान, तपाईं परीक्षण लिन र निवारण पाठ्यक्रमहरू लिन आवश्यक छ।
संक्रमण स्रोत: परिभाषा, प्रकार, पहिचान
संरचना र हृदयको प्रकार्य। कसरी मानव हृदय गर्छ?
सर्वश्रेष्ठ रिसोर्टमा भोलोग्डा क्षेत्र। भोलोग्डा - अस्पताल। अस्पताल "Yantar"
बाल खोप जीवनको पहिलो वर्ष - जिम्मेवार कार्य
Endocrine ग्रन्थीहरूको - तपाईंको आपूर्तिकर्ता प्राकृतिक हर्मोन
प्रेममा कुंभ पुरुष वा के कुंभ प्रेम छ?
धन्यवाद Terence Travnik
पानी को रंग। पानी को निर्धारण गुण
गैर-शास्त्रीय विज्ञान: गठन, सिद्धान्त, विशेषताहरु
त्रुटि देखापर्यो। कृपया पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्। प्ले आईडी
विद्यार्थी लागि विनिमय कार्यक्रम - विदेशी भाषा कौशल सुधार गर्न एउटा प्रभावकारी तरिका हो।
मांसपेशी तन्तु: संरचना र कार्य। मांसपेशी तन्तु को संरचना को सुविधाहरू
परिणाम - सफलता को मुख्य घटक छ
Omphalitis वयस्क - लक्षण र उपचार
कन्स्टान्टिन हबसेन्सि फाउण्डेशनले सधैं सहयोग पुर्याउनेछ